Iflethi enefenitshala kwisixeko saseFranca/SP - I-Airbnb
Iflethi enefenitshala kwisixeko saseFranca/SP
Vila Champagnat, São Paulo, Brazil
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRossana
Iflethi yohlobo lweflethi, enegumbi lokulala eli-1 elahlulwe kwigumbi lokuhlala ngodonga kunye nomnyango, lifakwe isitovu, ifriji kunye nebhedi ye-queen-side. Igumbi lokuhlala linetafile, izitulo ezi-4, isofa kunye nesitulo sokufunda. Yindawo esebenzayo kwabo bafuna ukuchitha ixesha kwisixeko saseFranca.
Okwangoku, sikhetha ukuhlala ixesha elide.
Le ndlu ikwisakhiwo esineelevator kunye ne-concierge yeeyure ezingama-24. Ikufuphi neyona ndlela ixakekileyo esixekweni, inokufikelela ngokulula kwizikhululo zerhasi, iivenkile eziluncedo, iivenkile ezinkulu, iindawo zokuthenga kunye neebhaka.
Le ndlu ikwindawo yokuhlala, kufutshane nenye yeendlela zokuphuma kwisixeko saseFranca. Nangona iyindawo yokuhlala, ngenxa yokufikeleleka ngokulula kwindlela enkulu, ubumelwane buthanda ukuba matasatasa.
Umbuki zindwendwe ngu- Rossana
Ndihlala ndifumaneka ngokubhaliweyo, kodwa umamkeli-zindwendwe uya kufumaneka ngobuqu nanini na iindwendwe ziyifuna.